Nahoana aho no mety tsy hiverina any El Salvador. · Global Voices teny Malagasy
Saingy mety tsy hanana safidy ny sasany
Voadika ny 25 Janoary 2021 15:23 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, Português, русский, українська, Nederlands, Română , عربي, 日本語, English
Sary nalain'ny mpanoratra tamin'ny fitsidihany farany tany El Salvador tamin'ny Jona 2019
Tao amin'ny De Wereld Morgen no nivoaka voalohany ity tantara ity ary naverina navoaka indray ato amin'ny Global Voices, miaraka amin’ny fahazoandàlana.
Mangatsiatsiaka sy mando ny mangiran-dratsy any El Salvador. Isaky ny mandeha any amin'ity firenena tropikaly sy mafana ary vôlkanika any Amerika Afovoany ity aho , no tafafoha amin'ny 6 maraina nohon’ny feon'ilay tovolahy mivarotra mofo: ” mofo ô, mofo ô”, hoy izy mihiaka sady mampaneno lakolosy amin'ny bisikiletany. Na ny olona tia matory toa ahy aza dia nankafy an'io traikefam-piainana andavanandro io tany. Tamin'ny diako farany nankany amin'ny tanin-dreniko anefa, na izany aza, dia fahatsapàna fahasemporana mahazatra no nisolo ny fahatsiarovako.
Nilàzana aho fa ity tovolahy ity dia mitsikilo ny manodidina amin'ny anaran'ireo andian-jiolahy mpamono olona izay mipetraka ery amin’ny faran’ny arabe. Fanafenana fotsiny ihany ilay bisikileta – ary karazana fanarahamaso ny mofo vidianay isaky ny maraina. Nihalevona ny fitiavako ary tsy nisy maraina nitovy tamin’ny teo aloha intsony.
Isaky ny miverina any amin'io firenena io aho izay miala kilaometatra an-jatony vitsivitsy ambanin'i Meksika, dia mihatery ny toerana sisa azo ifohana rivotra. Avy tamina fianakaviana Salvadoriàna sy belza aho, ka indraindray mitsidika ny havako ary miasa ho mpanao gazety tany koa.
Ho an'ny maro, toy ny “favelas” (ambany tànana) no andraisan'ny manodidina ireo tanàna ipetrahan'ny havako akaiky; “ambany tanàna” anjakan'ny herisetra sy ny fahantrana, saingy ho ahy, midika ho fotoana mahafinaritra miaraka amin’ny fianakaviana be fitiavana, lalao miaraka amin'ny zanaky ny mpiray tampo ary sakafo matsiro nahandroina tao an-trano. Nandritra ny taona maro anefa, hitako fa ahiahy no nameno ny fiainain'ireo havako.
Ny tangoliky ny herisetra
Iray amin’ny masoandro, amin’ny morontsiraka ary toetr'andro tropikaly, malaza amin'ireo ‘’surfeurs’’ ny fiainana any Salvador. Firenena izay, tia mandihy ihany koa satria tsy fantan'ireo mponina ao intsony hoe rahoviana izy ireo no ho afaka handihy indray. Mila kajiana koa ny fivezivezena rehetra any ivelan'ny trano, mba ho fitandroana ny aina rehefa ao El Salvador. Ireo andian-jiolahimboto no mifehy ny lafim-piainana rehetra amin'ny alàlan'ny fenitra sôsialy tsy hita maso, fa ny tena izy, fenitra sôsialy izay izay tsy maintsy ananan'ny olona tetikady ny fitetezana azy. Mandositra ny boribory vetavetan'ny fahantrana sy ny heloka bevava ireo Salvadoriàna, izay lova tsy voavaha navelan'ny ady an-trano tamin'ny taona 1980, fanjakàna malemy sy tsy azo itokiana ary ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro izay miteraka tsy fahampian-tsakafo ka lasa vao mainka miteraka fahantrana bebe kokoa izany rehetra izany. Salvadaoriàna an'aliny, anisan'izany ny fianakaviako, no nangataka fialokalofana tany Etazonia, Meksika, Espana ary Belzika tato anatin'ny taona vitsivitsy.
“Salvadoriàna efa ho 20 000 no nisy namono nanomboka tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2017. Ity dia fahafatesan'olona mahery setra kokoa noho ny tany amin'ny firenena maro izay niady nandritra ireo taona ireo, toa an'i Libia, Somalia ary Okraina,” hoy ny tatitra nataon'ny Crisis Group, vondrona mpikaroka manana ny foibeny ao Bruxelles. Salvadaoro ihanykoa no manana ny taha ambony indrindraeto an-tany amin'ny famonoana vehivavy.
Matetika tanisain'ireo mpangataka fialokalofana ireo fandrahonana mahery setra ataon'ny andian-jiolahimboto, izay vondron'olona manaraka rindra ahitàna tsy ampy taona sy olon-dehibe izay mivelona amin'ny fanararaotana sy fivarotana zava-mahadomelina amin'ny sehatra ambanimbany. tany am-piandohany, teraka tany Etazonia ireo andian-jatovo ireo nandritra ny ady an-trano tao Salvadaoro (Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Salvadoriàna an'hetsiny maro no nandositra ireo andiany mpamono nofanin'i Etazonia, hialokaloka any Los Angeles, saingy navela hiady irery izy ireo ary tanora maro no niafara tamin'ny asa ratsy. Tamin'ny faran'ny taona 1990, maro tamin'izy ireo no noroahana niverina tany Salvadaoro). Ankehitriny, mametraka ny lalàny manokana izy ireo, milahatra amin'ny an'ny fanjakana.
Ohatra, tsy afaka miditra ao amin'ny tanàna onenan’ny fianakaviako mihitsy aho raha tsy misy havana, izay mipetraka ao amin'io faritra manokana io, tonga maka ahy eo am-pidirana. Horaisina ho toy ny vahiny aho izay midika ho loza mitatao ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny andian-jiolahy. Raha mitondra fiara ianao miditra any, mila mampidina ny varavarankely ary mamono ny jiro ihany koa. Ireo izay tsy mankatò ny fitsipiky ny andian-jiolahimboto dia heverina ho fanoherana azy ireo ka azo vonoina eo noho eo. Ireo – manomboka amin'ireo mpanankarena tompona orinasam-pitaterana ka hatramin'ireo mpivarotra tsotsotra eny an-tsena – dia vonoina ihany koa raha tsy mahaloa ny anjara vola takiana isambolana amin-dry zareo.
Fitangosana vola isambolana
Indray andro, sosotra aho, nitaraina tamin'ny havako iray efa zokiolona momba ny fahasosorana amin'ny fandehanana am-pitandremana fatratra miaraka amin'ireo zatovo mifoka rongony eny an'arabe. “Eny, bichos izy ireo, ireo ankizy kely ireo,” hoy ny navaliny. “Nefa efa mihoson-drà ny tànany.”
Any Salvadaoro, ampahany amin'ny resaka isanandro ny momba ny olom-pantatra nisy namono na nanjavona. Teo anelanelan'ny fisotroana kafe roa sy ny fikakerana ‘’cookie’’, no nohazavain'ny zanak'olo-mpianadahy tamiko, fa nandritra ny fitsidihany ny reniny rehefa Alahady, ny nahitana ilay mpamily fiarakaretsaka mpifanolo-bodirindrina aminy, hita faty noho ny tsy fandoavana ny saram-pandraharahàna.
Zatra matahotra ny ainy ny zatovo rehefa miakatra amin'ny fiara fitaterana ho any am-pianarana, ary maro no nahita vatana mihosoin-drà rakofana lamba fotsy eny amin'ny arabe eny. Sorohan'ireo olondehibe ny ùotondra fiara aorian'ny filentehan'ny masoandro amin'ny 6 ora hariva – “inona no hitranga raha simba amin'ny toerana iray masiaka ilay izy? Nisy namana iray mpiara-mianatra tamiko niharan'ny herisetra ary novonoina tamin'io fomba io.”
Mahalala olona tsy maintsy nandositra ny firenena ny Salvadoriàna rehetra, na novonoin'ny andian-jiolahy na novonoin'ny vadiny ihany. Heverina ho tsara vintana izay olona tsy mba nisy namono ny fianakaviany. Amin'izao androntsika izao, mihodina amin'ny fanjavonan'ny tanora ny resaka, izay inoan’ny sasany fa nanolo ny famonoana olona miharihary.
Ka rehefa mahazo fandrahonana ho faty ny Salvadoriàna iray dia raisin'izy ireo am-pahamatorana izany. Miezaka mitady fialofana any amin'ny fireneny izy ireo aloha, izay asa sarotra satria i Salvadaoro dia lehibe kokoa noho Belzika, saingy maty sasaka ny isan'ny mponina any. Manakaiky ny antsasaky ny tapitrisa ny olona nafindra toerana tao anatiny ihany tamin'ny 2010, tao amin'ny firenena izay fehezin'ny andian-jiolahy ny 94 an-jatony ny tànana. Sarotra ny miafina amin'ireo mafia voarindra tsara rehefa, amin'ny alàlan'ny fahafantaranao olona, mora kely aminao ny mitsongo dia na iza na iza.
Sary nalain'ny mpanoratra tamin'ny fitsidihany farany tany Salvadaoro tamin'ny Jona 2019
Ireo “niverina an-tsitrapo”.
“Eric” (anarana foronina ho fiarovana azy) dia mpangataka fialokalofana taloha tany Belzika izay naverina tany El Salvador tamin'ny Novambra 2020 tamin'ilay sidina “charter”ho an’ny “mpiverina an-tsitrapo”, nankalazaina ary nomanin'ny governemanta. Nahita asa tao amin'ny trano fisakafoanana iray izy rehefa tafaverina tany Salvadaoro. Matory any amin'ny toeram-piasany izy izao ary tsy mivoaka ao raha tsy rehefa hividy sakafo ihany.
“Efa ela aho no tsy nonina teto, ka tsy hitako izay haleha,” hoy i Eric tamiko tamin'ny antso WhatsApp tamin'ny Desambra. “Amin'ny fihaonana sasany [iarahana amin'ireo mpikambana amina andian-jiolahy], savain-dry zareo hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladiha aho, indraindray manontany ahy ny niaviako izy ireo. Matahotra aho, matahotra mafy sao hiteraka olana ho ahy indray izany ka hiala ao an-tranoko aho. Ary tsy hiverina intsony “.
Eric, 25 taona,, nandositra tany Belzika rehefa tonga tao an-tranony hitady azy, hangalatra ny fananany ary nandrahona azy ho faty “raha mitory” ireo andian-jiolahy, roa taona lasa izay. “Talohan'izay dia olana kely tsotra ihany no nananako,” hoy i Eric. “Fangalarana na fanafihana anaty fiara fitaterana”, izay niafara tamin'ny poa-basy indraindray. Fa ho azy kosa, tonga ary nanova ny zavatra rehetra ny fandrahonana rehefa hitan'ireo andian-jatovo ny toerana nonenany. Na fony izy tany Belzika aza dia mbola nitady azy tao an-tranony taloha izy ireo, hoy izy.
Tsy afaka nahazo tombony tamin'ny fialokalofana tany Belzika i Eric noho ny tsy fahampian'ny porofo. Natory teny amin'ny arabe tany Bruxelles nandritra ny volana vitsivitsy izy rehefa niafara tamin'ny fandàvana ny dinga fangatahany fialokalofana.
Isan'ny mandrafitra ny sela sôsialy ireo andian-jiolahy
Nambarany fa tsy afaka nahazo porofo hafa na fanampiana avy amin'ny manampahefana Salvadoriàna izy. Fantatsika fa tsy any amin'ny faritra mahantra sasany ihany no miasa ireo andian-jiolahim-boto; isan'ny sela sôsialy mandrafitra ny fiarahamonina izy ireo, manomboka any amin'ny paositry ny polisy ka hatrany amin'ny biraon'ny ben'ny tanàna, mandalo amin'ireo ankizy mpianatra sy ny ray aman-dreniny. Ireo governemanta nifandimby sy ireo antoko politika dia nanao fifanarahana miafina tamin'izy ireo mba hahazoana sitraka amin'ny fampielezan-kevitra na hisiana sarintsarina fihenanan'ny tahan'ny famonoana olona.
Andro vitsy taorian'ny niverenany tany Salvadaoro, hitan'i Eric fa nanjavona ny iray tamin'ireo olom-pantany. Ny môtô an’ilay tovolahy ihany sisa no hita.
Toa an'i Eric, Salvadoriàna maro no nahita fialofana tany Belzika. Tamin'ny 2015, 35 ireo Salvadoriana nangataka fialokalofana tany Belzika; efatra -taona taty aoriana, 1.365 ireo Amerikanina Tanivo no nandondona ny varavaran'i Belzika. Tamin'ny 2018, neken'i Belzika ho toy ny mpitsoaponenana ny ankamaroan'ny Salvadaoriàna (96,5%) . Tamin'ny 2020, nidina hatramin'ny 9,5% io salasalan’isa io, araka ny tarehimarika farany azo avy amin'ny biraon’ny antontanisa eoropeàana, Eurostat.
Na dia eken‘i Belzika ho toerana mampidi-doza tokoa aza i El Salvador, ny biraony mahaleotena mitsara izay ho afaka mandray sy tsy afaka mahazo ny satan'ny mpitsoa-ponenana, hoy ny ankamaroan'ireo olona tonga any Belzika ankehitriny dia tsy tena tandindonin-doza akory any El Salvador, ary vokatr'izany, ireo mpikatsaka fialokalofana dia mahatsiaro fanerena hiverina any Amerika Afovoany.
Manan-tsofina ny rindrina
Mandritra izany fotoana izany, any El Salvador, manohy miresaka momban’ny herisetra sy fanjavonana ao aminy, amin'ny feo malefaka ny olona satria “manan-tsofina ny rindrina”. Varavarankely maro no arovan'ny tsato-by nefa tsy misy fitaratra; vongana simenitra tsotra fotsiny ny rindrina, ary ny olona – toa ilay zazalahy mpivarotra mofo – dia afaka mandre izay resahana raha tsy mibitsibitsika ianao.
Fikasan'i Eric ny hanohy handalina ny teny frantsay sy anglisy, hiomanany rehefa tonga indray ny fotoana hifindrany monina sy hanavotany ny ainy. Raha ny momba ahy dia tsy haiko hoe rahoviana aho no hanandrakandrana hiverina any El Salvador, hamihina indray ny fianakaviako ary hahatsapa ny fangatsiahatsiahana sy hamandoan'ny maraina.